Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo dalka ku soo laabtay, dadkana ugu baaqay inay diidaan dib u dhac ku yimaadda doorashada | Somaliland.Org
Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo dalka ku soo laabtay, dadkana ugu baaqay inay diidaan dib u dhac ku yimaadda doorashada
January 30, 2009	Hargeysa (Somaliland.org) – Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo ah Siyaasi Mucaarad ah ayaa ugu baaqay shacbiga reer Somaliland inay dareenkooda ka muujiyaan inaanay ogolayn in doorashadu dib uga dhacdo wakhtigii loo cayimay oo ay haatan inaga xigto muddo ka yar 57 maalmood oo kaliya.
Dr. Gaboose oo saxaafadda kula hadlay Madaarka Cigaal International Airport, isaga oo ka soo laabtay dalka Maraykanka waxa uu sheegay in beesha caalamku indho gaar ah ku hayaan doorashada madaxtinimada Somaliland, isla markaana si gaara ugu qiimaynayaan doorashada inay noqoto mid xor iyo xalaal ah oo ku qabsoonta wakhtigeed.
Dr. Maxamed Cabdi Gaboose waxa uu faahfaahin ka bixiyay ujeedada socdaalkii uu ku tagay dalka Maraykanka, isaga oo sheegay in muhiimaddiisa ugu weyni ahayd in xooga la mideeyo si isbedel siyaasadeed dalka uga yimaado oo furfurani.
Dr. Gaboose isaga oo ka waramaya ujeeddada socdaalka uu ku soo maray dalka Maraykanka waxa uu yidhi, “Waxaan u tegey halkaa taageerayaashii Qaran iyo KULMIYE in heshiiskii wanaagsanaa ee na dhex maray annaga iyo KULMIYE inaan uga sheekeeyo wixii salka ku hayo, kaas oo ah in xooga la mideeyo si isbedel siyaasadeed dalka uga yimaado iyo siyaasad furfuran. Waxa aan idiin sheegayaa dadka aan u tagay, ee aan islahaa wax ka dhaadhici, waxay ahaayeen dad bisil, oo waxaan u sheegayay in ay qalbiga u sii adkaysay mooyaane KULMIYE ah ayaan u tagay, kuwii Qaranna KULMIYE ayay ahaayeen oo dhawaaqa ayay sii maqleen, kuwii KULMIYE-na waabay sii ahaayeen. Markaa dad uun maanta gacantooda, jeebkooda iyo codkoodaba diyaar u ah in Odayga Musharaxa ah Axmed Siilaanyo in uu ku guulaysto. Kolay halkaa waxa taalay waanu hubnaa oo wuu soo baxayaa.” Dr. Maxamed Cabdi Gaboose, waxa madaarka ku soo dhoweeyey masuuliyiin door ah oo ka tirsan xisbiga KULMIYE oo uu horkacayey Guddoomiyaha xisbiga, mudane Axmed Maxamed Siilaanyo.
Axmed Maxamed Saleebaan, Somaliland.org, Hargeysa.